१० लाख लिएर फरार भएपछी १३ बर्षिय छोराको यसरि …. – Complete Nepali News Portal
१० लाख लिएर फरार भएपछी १३ बर्षिय छोराको यसरि ….
ScotNepal September 10, 2020
दुख सुख जिन्दगीका २ पांग्रा हुन, तर कुनैबेला दुख भनेको गरिब परिबारको लागि एउटै पांग्रा भईदिन्छ । जहिले पनि आई पर्ने समाधान कहिले नहुने । हो आज हामी त्यस्तै यो परिबारको कुरा गर्दैछौ जहा अनगिन्ती दुखका बाबजुद पनि यि ३ ब्यतिmले यि महिलाको लाखौ रकम लिएर अहिले फरार भएका छन । करिब १० लाख रुपैया लिएर यि गरिब महिलाको घर उजाडेका छन । कुरा हो जोरपाटी काठमाडौ दक्षिण ढोकाको जहा यि युवती बसोबास गर्छिन ।
छोरालाई उपचार गर्न राखेको पैसा लिएर फरार भएपछि अहिले १३ बर्षिय बाबुको मृ,,त्यु भएको छ । ब्लड क्यान्सरले उनलाई अकालमै लग्यो कारण थियो पैसा, जुन पैसा लिएर यि ३ युवा फरार भएका छन अहिलेसम्म । ३ बर्षमा रोग लागेको बाबुको उपचार पनि भएन अहिले अर्को बाबु पनि टाउकोमा समस्या देखियो तर पैसा नभएको काणले गर्दा मिडियामा आउन बाध्य भएकी छिन । चर्चित नायक अनमोल केसीसंग पनि यस्तो नाता रहेको यो परिबारको अहिले बिलौनाले देश रोएको छ, आमा रोएकी छिन, हारगुहार गरिरहेकाी छिन भिडियो हेरेर यि पापीलाई खोज्न सहयोग गरिदिनुहोला |
मोरंगमा सबैलाई चकित बनाउने स्वर भएका युवा, नारायण गोपालको गित...
नारायण पौडेलको फेरि अर्को कर्तुतको भयो पर्दाफास, अमेरिका र दुबईमा...
लक्डाउनमा काठमाडौँमा घट्यो डरलाग्दो घटना, प्रेमिकाको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला...
डरलाग्दो रोग इलाममा भेटियो, बिचरा आमा रुँदारुँदै सकियो अन्तरवार्ता (भिडियो...